याे सरकारलाई हाम्राे पार्टीकाे समर्थन नै छैन भने समर्थन कसरी फिर्ता लिनु ? : नारायणकाजी - साँचो खबरonline khabar
याे सरकारलाई हाम्राे पार्टीकाे समर्थन नै छैन भने समर्थन कसरी फिर्ता लिनु ? : नारायणकाजी
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई आफ्नाे पार्टीकाे समर्थन कहिल्यै नभएकाे बताएका छन् ।
बिहीबार बिहान पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेकाे स्थायी कमिटीकाे बैठकले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिने चर्चा चलेकाे थियाे । तर उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था नै नभएकाे बताए ।
‘याे सरकारलाई हाम्राे पार्टीकाे समर्थन नै छैन भने फिर्ता कसरी लिनुपर्छ ?’, उनले भने, ‘तर पनि बजारमा जे चर्चा परिचर्चा चलेकाे छ, त्यसका लागि पनि हामीले समर्थन छैन भनेर एउटा पत्र लेखेर जानकारी चाहिँ दिन्छाैं ।’
उनले सरकार गठन हुँदाकाे परिस्थिति र अहिलेकाे परिस्थित एउटै नभएकाले याे सरकारलाई समर्थन नदिएकाे बताए । ‘पार्टी एकता हुँदाकाे सरकार भएकाले पूर्ववत दुई पार्टी भएपछि हामीले समर्थन गरेका छैनाैं’, उनले भने ।
उनले आफूहरूले समर्थन नरहेकाे जानकारी गराए पनि नगराए पनि प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै बेला विश्वासकाे मत लिन सक्ने बताए । भने, ‘हामीले समर्थन छैन भनेर मात्रै विश्वासकाे मत लिनुपर्ने हाे र ? तै पनि हामी पत्र लेखेर जानकारी चैं दिन्छाैं ।’
कहिले दिनुहुन्छ त पत्र भनी साेधिएकाे प्रश्नमा उनले भने, ‘हेराैं न कहिले हुन्छ । पत्र लेख्नलाई जहिले लेखे पनि भयाे ।’